Maziso Akachengeteka: dzivisa kuora kwekuona nekuda kwekushandisa zvisirizvo kwema skrini | Linux Vakapindwa muropa
Nema teleworking, mazuva marefu ekudzidza, kana akareba emitambo yemavhidhiyo, maziso ako anotambura mhedzisiro yekushandisa kwenguva refu kwetekinoroji nyowani. Paunenge uchitarisa pachiratidziro kwenguva yakareba kudaro, kunyanya iwo marefu ekureba eruvara rwebhuruu, iri kukonzera matambudziko mukuona kwako. Kuedza kurerutsa zvinokuvadza izvi, pane mapurojekiti akaita seMaziso Akachengeteka.
Kune vanhu vakawandisa vane matambudziko ekuona. Kare, zvaingobata ruzhinji rwevakuru, asi ikozvino avo vane matambudziko akanyanya erudzi urwu ndevechidiki nekuda kwekushandisa kweaya matekinoroji. Paunenge uchitarisa pachiratidziri padhuze, iyo optic nerve inoshungurudzwa nekusaitwa kuti inyatso tarisa, kuwedzera kune mhedzisiro yekupenya uye zvisiri zvechunhu mavara ezvemazuva ano mapaneru, pamwe nekudzikiswa kweiyo flicker frequency.
Zvese izvo zvinopera nekuneta, kuoma maziso, kutarisira yakakurumbira macular degeneration inosanganisirwa nezera risati rasvika, kuwedzera mumatambudziko senge myopia, nezvimwe. Kuti udzivise izvo, unogona kushandisa zvirongwa zvakaita seMeso Akachengeteka. Iyo yakapusa app iyo inokuyeuchidza iwe kutora mabhureki kuti urege kunetsa chiratidzo chako zvakanyanya uye kudzivirira kushushikana uye nematambudziko emumuviri muziso reziso rako.
Maziso Akachengeteka anotsigirawo a akateedzana emabasa, gadzirisa mapfupi kana marefu kumbomira kuitira kuti maziso ako azorore kubva pachiratidziri, usavhiringidze modhi kuti irege kusvetuka kana iwe uchishanda yakazara skrini, ratidza zviziviso pamberi pega pause, zviyeuchidzo zvinonzwika kuratidza kupera kwekumbomira, sarudzo ku kiya iyo skrini kuti ikumanikidze kutevedzera nhungamiro, smart kumbomira uye kutangazve zvichienderana nesisitimu yekukwirisa, yakawanda-yekutarisa rutsigiro, nezvimwe.
Kana zviri zvekudzidzira kurovedzwa mubhureki rega rega, iwe unofanirwa kutevera iyo 20-20-20 mutemo:
Yese maminetsi makumi maviri pamberi pechiso ...
… Zorora kwemasekondi makumi maviri uchitarisa pane chinhanho kure nemukamuri kana pamamiriro ezvinhu (zvirinani kuti zvive kure nezve 20m kure) uye…
… Tarisa kure kure kwemaminitsi makumi maviri.
Ipapo unogona tangazve kushandisa skrini uye dzokorora tsika iyi nguva nenguva. Kuti utevere uyu mutemo unorayirwa nenyanzvi dzezve ophthalmologist, unogona kushandisa Akachengeteka Meso kuti usakanganwa.
Mamwe mashoko - Yakachengeteka Eyes Saiti
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Maziso Akachengeteka: inodzivirira kuora kwekuona nekuda kwekushandisa zvisirizvo kwema skrini